I-Beetroot | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
I-Chard: ukukhetha kwezinhlobo zokutshala
I-Mangold iyisitshalo se-biennial herbaceous, i-subspecies ye-beet ejwayelekile, eyingxenye ye-hawk engaphansi komndeni wakwa-amaranth. Ibanga lokusabalalisa liphakathi nendawo engaseningizimu yeYurophu. Kunezinhlobonhlobo eziningi ezahluke kumbala obala (omhlophe, ophuzi, ohlaza okwesibhakabhaka nohlaza obumnyama) nokuthungwa kwamaqabunga, okungahle kube nokuhleleka.
I-beet ye-Sugar: konke okudingeka ukwazi mayelana nokulima kwalo
Njengomthetho, abantu abanokungabaza ukuthi isithombo sebhitrudi ishukela kuphela yinto ebonakalayo yokucubungula izimboni, futhi kuphela amabhizinisi agribusiness noma amapulazi ahlanganyela ekutshalweni kwawo. Phakathi naleso sikhathi, ubuchwepheshe bokutshala isithombo sebhitrudi soshukela bukhona ngempela emibhedeni engadini ejwayele umnikazi ngamunye wesakhiwo esincane sezwe.
Indlela yokufaka ubhontshisi ebusika efrijini
I-Beetroot ngumkhiqizo ogcinwe isikhathi eside; ukhona emashalofini unyaka wonke, ngakho-ke kubonakala sengathi akukho phuzu ekulungiseleleni ngokukhethekile ebusika. Kodwa uma isivuno sesikhululekile, kodwa ayikho igumbi lesitoreji, akukho lutho oluhlala kodwa ukuzama ukukhipha isivuno sempande. Kuvela ukuthi kunezindlela eziningi zokwenza umsebenzi onjalo, njengoba bethi, "ekhaya".
Ukumisa amabhontshisi: izinzuzo kanye nokulimala, izindlela ezithandwayo, uhlelo lokusebenza
I-Beetroot ibhekwa njengenye yemifino ethandwa kakhulu e-Ukraine naseduze kwamanye amazwe. Futhi akumangalisi, ngoba imifino ebomvu igcwele amavithamini namaminerali. Ukumisa amabhontshisi ikuvumela ukuba ugcine izindawo ezizuzisayo zomkhiqizo wonyaka wonke. Izinzuzo zendlela yokuvuna Abantu sekuyisikhathi eside beqaphela ukuthi uma izithelo ezintsha noma imifino isomisiwe kahle, izogcina inani eliphelele lemisebenzi ewusizo.
Indlela yokupheka ama-beet okusheshayo futhi okumnandi
I-Beetroot umkhiqizo ongahlali kakhulu ezindaweni zethu, kodwa futhi ewusizo kakhulu ngenxa yokuqukethwe kwe-fiber ephakeme, isethi yonke yezakhi zokulandelela namavithamini (A, B, C), kanye nama-acids e-organic kanye nama-amino acids. Isetshenziswa njengendlela yokwelapha i-hangover, ithuthukisa isimiso se-endocrine nezinso, siyasiza ekudleni futhi kuyadingeka kwabesifazane abakhulelwe.